Ndị ọka iwu International Media na Netherlands - Law & More
Nchedo nke ikike nzuzo na-aghọwanye mkpa na ọha anyị dị ugbu a. Enwere ike ịme nke a maka akụkụ buru ibu na digitalization, mmepe nke na - ejikarị usoro dijitalụ na - eme ọtụtụ ihe. O di nwute, digitalization bukwara ihe egwu. Iji chekwaa nzuzo anyị, anyị hiwere iwu nzuzo.
LAW & MORE CAN P ARSS inyere gị aka
N'AGBANYEKA ANWETA Iwu Iwu
Okwu a bụ mgbasa ozi kpuchie akwụkwọ akụkọ, telivishọn, redio na ịntanetị. Ọ nwere ike ime na gị na ụlọ ọrụ gị apụta na mgbasa ozi n'amaghị ama na n'ụzọ adịghị mma. N'ime ụwa anyị nke oge a ebe ekesara ozi ma chekwaa ozi n'ịntanetị, nke a nwere ike ịchụ gị ọsọ. Ya mere, ọ dị mkpa ịme usoro ziri ezi ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu mgbasa ozi.
Iwu mgbasa ozi gụnyere mpaghara iwu dị iche iche. Enwere ike lekwasị anya na iwu nwebisiinka, iwu nzuzo na ikike ihe osise. Na ịza ajụjụ a, akwụkwọ ekwenyeghị n'iwu, a ga-echedo ikike gị ichebe nke nsọpụrụ na aha ọma megide ikike nnwere onwe ikwu okwu.
N'ọnọdụ ndị mebiri emebi elektrọnik, ọ dị mkpa na edekọwo ihe akaebe ziri ezi. N'ihe banyere ozi ezighi ezi, ọ dị mkpa na edobere email a n'ụdị elektrọn. Ọzọkwa, enwere ike ịdekọ ihe akaebe na bewijsonline.nl. Nke a na - enyere gị aka ịnwe ezigbo ihe akaebe.
Law & More nwere ike inyere gị aka n'okwu ọ bụla gbasara iwu mgbasa ozi. Ndị ọka iwu anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ ma zaa ajụjụ gị niile.
Anyị na-amasị echiche okike ma na-ele anya karịa akụkụ iwu nke ọnọdụ. Ọ bụ ihe niile gbasara ịba isi nsogbu ahụ na ịlụso ya ọgụ n'okwu. N'ihi echiche na-enweghị isi na afọ nke ahụmịhe anyị, ndị ahịa anyị nwere ike ịtụkwasị obi na nkwado nkeonwe.